रेडियो तमोर १०२ मेघाहर्ज तमोर हालखवर २०७५ भदौ ६ गते बुधवार साँझ ६ वजे
तेस्रो पाथिभरा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगितामा ताप्लेजुङ जिल्ला फुटवल संघको कुनैपनि संलग्नता नरहने
आगामी भदौ ८ गतेवाट हुन लागेको तेस्रो पाथिभरा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगितामा ताप्लेजुङ जिल्ला फुटवल संघको कुनैपनि संलग्नता नरहने भएको छ । ताप्लेजुङ जिल्ला फुटवल संघको आज वसेको वैठकले आफ्नो कुनैपनि संलग्नता नरहने निर्णय गरेको हो । जिल्ला फुटवल संघ फुटवलको जिल्लाको सर्वाेच्च निकाय भएको भएपनि लाखेजात्रा सञ्चालन समितिले आफुँहरु सँग कुनैपनि समन्वय समेत नगरेका कारण यस्मा आफुँहरुको सम्लग्नता नरहने ताप्लेजुङ जिल्ला फुटवल संघका महासचिव विश्व नाल्वोले जानकारी दिनुभयो । अघिल्ला वर्षहरुमा जिल्ला फुटवल संघले प्राविधिक सहयोग गर्ने गरेको थियो । यसैविच आजको वैठकले आगामी भदौ २७ गतेवाट ग्रास रुट फुटवल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छ । यस्का लागि जिल्ला भरिवाट ६ ओटा विद्यालयको सहभागिता रहने छ । यस्मा ८ देखि १० वर्ष र ११ देखि १३ वर्ष सम्मका विद्यार्थीको सहभागिता रहने छ ।
यता आज कै वैठकले जिल्ला भरिका एन्फा रेफ्रि तथा एन्फामा आवद्ध प्रशिक्षकहरुले अन्य प्रतियोगिता सहभागिता जनाउँदा जिल्ला फुटवल संघ ताप्लेजुङ सँग सम्न्वय गर्नुपर्ने पनि निर्णय गरेको छ । महासचिव नाल्वोका अनुसार एन्फामा आवद्ध भएका रेप्रिंm तथा प्रशिक्षकले अन्य प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनको लागि ताप्लेजुङ जिल्ला फुटवल संघको अनुमति लिनुपर्ने छ ।यसैविच ताप्लेजुङ जिल्ला फुटवल संघले यस प्रतियोगिताको सफलताको शुभकामना समेत दिएको छ । यस वर्षको पाथिभरा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिता आगामी भदौ ८ गतेवाट १६ गते सम्म सञ्चालन हुनेछ । प्रतियोगितामा १० टीमको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ ।
आमाको कुटाइबाट आठ वर्षीया छोरीको मृत्यु भएको छ। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका ५ सुब्बा चोकस्थित २७ वर्षीया हेमन्ता कुरुङ्वाङ (लिम्बू)ले आफ्नै आठ वर्षीया छोरी सफलतालाई कुटपिट गर्दा उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी नायव उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार बुधबार बिहान विद्यालय पठाउने क्रममा कपाल कोर्न नमानेपछि हेमन्ताले छोरीलाई लाठीले कुटपिट गर्दा दाहिने कन्चट, ढाड र दुवै हातमा निलडाम बनाएकी थिइन्। आमाको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएकी सफलताको बिर्तामोडस्थित बिर्तासिटी हस्पिटलमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक कोइरालाले जानकारी दिए। यता छोरीको मृत्युपश्चात् आमा हेमन्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडमा राखिएको जनाइएको छ।
कञ्चनपुरको भिमदत्तनगरपालिका–२ की १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन दबाब दिन महेन्द्रनगरमा हुँदै आएको प्रदर्शन उग्र बनेको छ।बुधबार बिहानैबाट प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयले महेन्द्रनगरमा टेलिकम कार्यालय नजिकै रहेको प्रहरी बिट जलाइदिएका छन् भने प्रहरीको बा १ झ ७३६५ नं को गाडी तोडफोड गरेका छन्। प्रहरीले भिड तितरबितर पार्न दर्जनाै‌‌ राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ। प्रहरीको लाठी चार्ज र अश्रुग्यासबाट दुई जना स्कूले विद्यार्थीसहित केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्।सदरमुकाम महेन्द्रनगर बजार मंगलबारदेखि नै ठप्प छ भने आजको प्रदर्शनले अझै उग्ररुप लिएको छ। स्थनीयबासी र व्यापारीहरुसहित महेन्द्रनगर आसपासका विभिन्न स्कूलबाट विद्यार्थीहरु स्वतःस्फूर्तरुपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
बालिका निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा सार्वजनिक गर्न महेन्द्रनगरमा लगातार प्रदर्शन हुँदै आएकोमा प्रहरीले एकजना हत्या आरोपी सार्वजनिक गरेपछि प्रदर्शनले थप उग्ररुप लिएको हो। ‘वास्तविक हत्यारा’ पत्ता लगाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन अगाडि भेला भएका प्रदर्शनकारीहरुमाथि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। आन्दोलनकै दबाबमा घटनाको २६ दिनपछि सोमबार प्रहरीले भीमदत्त–१९ बागफाँटाका ४१ वर्षिय दिलीपसिंह विष्टलाई मुख्य अभियुक्त किटान गर्दै सार्वजनिक गरेको थियो। तर, प्रहरीले सार्वजनिक गरेको अभियुक्तप्रति स्थानीयले विश्वास गर्न सकेनन्। मानसिक सन्तुलन गुमाएका कमजोर ब्यक्ति बलात्कारी र हत्यारा हुन नसक्ने स्थानीयको दाबी छ।
तीन प्रदेशका ३२ जिल्लामा २ वर्षभित्रै द्रुत गतिको इन्टरनेट, टेलिकमले माग्यो पौने ५ अर्बको प्रस्ताव
नेपाल टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्गलाइ केन्द्रित गरेर तीन प्रदेशका ३२ जिल्लामा पुर्याउने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने प्रस्ताव माग गरेको छ । टेलिकमले प्रदेश नम्बर १, २ र ३ आसपासका जिल्ला सदरमुकाम र नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म इन्टरनेट पुराउने गरी प्रस्ताव माग गरेको छ ।प्राधिकरणका प्रवत्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार टेलिकमले गरेको सहमति अनुसार ४ अर्ब ८८ करोड (करिब पौने पाँच अर्ब) रुपैयाँ नबढ्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँनु पर्ने छ टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर बिस्तार गरिने मुख्य सूचना राजमार्गका लागि मागेको २ वटा प्योकजमा हरेकेको ८० हजार रुपैयाँ र अन्य जिल्ला सदरमुकाबाट विस्तार गरिने अप्टिकल फाइबरका लागि हरेक प्याकेजको ७५ हजार रुपैयाँ टेण्डर दस्तुर तोकेको छ । टेलिकमको मागको यस्तो प्रस्तावमा प्रदेश एकको इलाम, झापा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, संखुवासभा, सुनसरी, मोरङ उदयपुर, खोटाङ, तेह्रथुम र भोजपुर जिल्लामा फाइबर विस्तारको काम हुने छ । प्रदेश दुईमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवनमा फाइबर विस्तार हुने छ ।
म राजनीतिक जोगी हुँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू राजनीतिक जोगी भएको बताएका छन्। गृह जिल्ला झापाको गौरादह नगरपालिकाले आयोजना गरेको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा उनले आफूलाई कमाउने कुनै मनसाय नरहेको बताए। उनले भने, ‘मलाई कमाउनु छैन। मौका पाएको छु काम गरेर देखाउँछु। जोगीलाई कमाउने धन्दा हुँदैन। म पनि राजनीतिक जोगी हुँ।’आफ्नो नेतृत्वको सरकार विकासको भिजन बोकेको सरकार भएको उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘नेपाललाई समृद्ध बनाउने अभियानमा म लागिपरेको छु। मैले ढाँट छलको राजनीति गर्नु परेको छैन, गर्दिन।’प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीबाट काम गर्नका लागि भरपूर सहयोग रहेको बताए।उनले आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिए। प्रम ओलीले भने, ‘अब बाँझा खेत जोतिनुपर्छ। आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्छ।’विदेशमा नेपालले जैविक उत्पादन पठाओस् भनेर मानिसहरु पर्खेर बसिरहेको उनले बताए। ओलीले भने, ‘अब हाम्रा उत्पादन जैविक हुनुपर्छ।’ सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जनतालाई दु:ख नदिन आग्रह गरे। बुधबार नै ओलीले झापाको कमल गाउँपालिकामा ५० शैयाको आयुर्वेद अस्पतालको पनि शिलान्यास गरे।
सरकार दिशाहिन भयाेः महामन्त्री कोईराला
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोईरालाले सरकार दिशाहिन भएको आरोेप लगाउनु भएको छ ।बुधबार नेपालगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री कोइरालाले मुलुकमा ठूल्ठूला सपना बाँड्ने काम मात्र भएको तर जनताका पिरमर्कामा सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाउनु भयो ।महामन्त्री कोइरालाले पार्टीलाई तेरो मेरो नभनी विपक्षको राम्रो भुमिका निर्वाह गर्न सके आउँदो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस पहिलो स्थानमा आउने दावी समेत गर्नुभयो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएको वेलामा पनि नेपाली काँग्रेसले एकढिक्का नबने देश नै संकटमा पर्ने जिकिर पनि उहाँको थियो ।महामन्त्री कोइराला नेपाली कांग्रेसको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी भएपनि आफुहरुले त्यस्लाई बोध गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि सरकारको काममा देखिएन स्थिरता
बलियो सरकारको अभावमा राजनीतिक अस्थिरताबाट जकडिएको मुलुकमा अहिले बलियो र स्थायी प्रकृतिको सरकार छ । तर पनि सरकार र विपक्षीको कार्यशैली अस्थीर कालखन्डकोजस्तै देखिनुमा नेताको चरित्र र जनमतप्रति विश्वास दिलाउन नसक्नु नै मुख्य रहेको टिप्पणी विश्लेषकहरुको छ ।राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको विकास हुन नसकेको भन्दै संविधानमा नै कम्तीमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेर स्थायित्वका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गरियो ।संविधान जारी भएपछिको निर्वाचनमा दुई पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धनले लगभग दुईतिहाइ मत ल्यायो र पार्टी एकता गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बन्यो ।
सरकार बनेको पनि ६ महिना भइसकेको छ । तर, सरकारको कार्यशैली भने पुरानै अस्थीर कालखन्डकोजस्तो छ ।सरकारलेमात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।सरकारले पनि आफ्नो सरकार ९ महिने वा वर्ष दिनकोमात्र होइन भन्ने गरी आभाष दिन सकेको छैन । उही कतिन्जेल हो र ‘उठाउँ, खाऔं’ भन्नेजस्तो देखिन्छ ।विपक्षी पनि ढुक्कैले अब पाँच वर्ष हामी सरकार बाहिरै हो भन्ने अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । जसले जनमानसमा राजनीतिक स्थिरताको आभाष गराउन सकेको छैन ।राजनीतिक चिन्तक प्राध्यापक डा. कृष्ण खनाल अस्थिरताजस्तो देखिनुको मूल जड ‘नेताको चरित्रबारे जनता विज्ञ हुनु हो’–भन्छन् ।
‘सत्तारुढ दलका नेताको चरित्र जनतालाई प्रस्ट छ । उनीहरुबाट खासै परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने अवस्था नहुने बुझाइमा मानिसहरु पुग्दैछन्’–खनालको निचोड छ ।राजनीतिक अस्थिरताका सन्दर्भ भने वर्तमान राजनीति हेर्दा निकै पुरानो भइसकेको हुनुपर्ने लाग्छ । अहिले सरकार अत्यन्तै बलियो छ । उसले चाहेको सबै विषय गर्नसक्छ । तर, गरिरहेको छैन ।केही विषय गर्न खोजे पनि त्यो जनताले आफू प्रतिकूलको भन्दै फिर्ता गराइरहेका छन् ।स्थानीय तहले गरेको कर वृद्धिमा सरकार टिक्न नसक्नु र डा. गोविन्द केसीको मागमा सरकार सम्झौतामा पुग्नुले सरकारको कार्यशैली र यात्राप्रति प्रश्न उब्जेका छन् ।प्राध्यापक खनाल मत पाउनु तर जनमतलाई कायम राखिराख्न नसक्नुले पनि ‘बलियो सरकारले लुते ताल’ देखाएको टिप्पणी गर्छन् ।
नेकपा एकीकरणको १०० दिन पुग्दै : किन पूरा भएन एकता प्रक्रिया ?
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको करीब एक सय दिन पुग्न लागेको छ ।मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठनको घोषणा भएको थियो ।एकताले ५६ वर्षपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका मुख्य दुई धारलाई एउटै बाटोमा ल्यायो ।जेठ ३ गते पार्टी एकताका क्रममा नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ʻप्रचण्डʼले एकता प्रक्रिया ३ महिनामा सकिने बताएका थिए । तर तीन महिना पूरा हुन लाग्दा पनि तल्ला कमिटीको एकताले पूर्णता पाएको छैन । प्रदेश, जिल्ला, भातृ संगठनहरूको एकता प्रक्रिया जारी रहेको भए पनि अहिलेसम्म दुई पार्टी भावनात्मक रूपमा एक भएका छैनन् ।
नागरिकता विधेयकमा सय भन्दा धेरै संशोधन प्रस्ताव
सरकारले दर्ता गराएको 'नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५' मा सय भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। विधेयकमा १ सय २ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। जसमा ६९ जना सांसदले २३ वटा दफा संशोधन गर्न माग गरेका छन्।संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा दुर्गा पौडेल, डिला संग्रौला, गगन थापा, हृदयश त्रिपाठी, प्रेम सुवाल लगायतमा सांसदहरु रहेका छन्। केहीले व्यक्तिगत र केहीले सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गत साउन २२ गते नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए।
दिनमा दुई गुणा रातमा चौगुणा काम गर्नुहोस् : मन्त्री पण्डित
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जनताले अनुभूति हुने किसिमले परिमाण आउने गरी कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।कार्यक्रममा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले गत निर्वाचन र सङ्घीयता कार्यान्वयनको कारणले विकास निर्माणमा अलमल भएको बताउँदै यसै वर्ष कर्मचारी समायोजनको काम सकिने बताए ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव नरेश चापागाईले अनुगमन नहुँदा योजना कार्यन्वयन गर्ने काम कमजोर रहेको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका उपसचिव खोमा ढकालले सरकारले शुरु गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली अभियानलाई सहयोग पुग्ने किसिमले काम गर्नुपर्ने बताए ।अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्रकुमार श्रेष्ठले बेरुजु फछ्र्योट सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयले गत आवमा चालूतर्फ ८८.५८ प्रतिशत बजेट र पूँजीगततर्फ ५३.०४ प्रतिशत गरी कूल ७५.०४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको जानकारी मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालल दिए । यस्तै मन्त्रालयले ४१.२१ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्योट र भौतिकतर्फ ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।
सर्वसाधरणले सजिलै फारम भरेर घरजग्गा पास गर्ने संयन्त्र तयार
सरकारले बिचौलिया निषेध गर्दै सर्वसाधरणले सजिलै फारम भरेर घरजग्गा पास गर्ने संयन्त्र तयार पारेको छ । विगतदेखिनै फारम भरेर जग्गा पास गर्ने व्यवस्था भएपनि झन्झटिलो भएर प्रयोगनै हुन नसकेको बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो संयन्त्र तयार पारेको हो । झझन्टिलो भएकै कारण मालपोत कार्यालयमा लेखापढी व्यवसायीलाई घरजग्गा पास गर्दा अतिरिक्त पैसा बुझाउनुपथ्र्यो । मन्त्रालयले फारमको नमूना परिवर्तन गरेर सामान्य लेख्न जान्ने व्यक्तिले भर्न सकिने बनाउन लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार सामान्य लेखपढ गरेका सर्वसाधारणले पनि आफैले भर्न मिल्ने गरी फारम बनाइनेछ । अहिले प्रयोगमा आइरहेको फारममा कुनै फर्म्याट नहुँदा लेखापढी व्यवसायीलाई गुहार्नै पर्ने अवस्था छ । तर अब आउने फारममा भने सबै कुरा बुझ्ने भाषामा राखिएको र छोटो बनाइएको मन्त्री पद्मा अर्यालले बताउनुभयो । घर जग्गाको किनबेच सुरु भएदेखिनै प्रयोगमा आएको फारमको नमुना लामो समयपछि परिवर्तन गर्न लागिएको हो । यस अघि लेखापढी व्यवसायीले व्यक्ति र ठाउँ हेरेर एउटा फारम भरेको पाँच सय देखि १५ हजार रुपैयाँ सम्म लिने गरेका थिए ।
शैक्षिक बेरोजगारी उच्च, १२ हजार ७ सय शिक्षकका लागि साढे २ लाखको आवेदन
शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक बेरोजगारीको दर एकदमै उच्च रहेको देखिएको छ । १२ हजार ७ सय शिक्षक पदका लागि झण्डै साढे २ लाखबढीले आवेदन दिएका छन् । उक्त संख्या प्रारम्भिक अनुमानमात्रै हो, आवेदन दिनेको संख्या अझ बढ्न वा घट्न सक्ने शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ । त्यति थोरै पदको लागि यति ठूलो संख्यामा आवेदन पर्नुले शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक बेरोजगारीको दर उच्च रहेको प्रष्ट हुन्छ ।शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि २०७२ असोज ३ देखि २०७४ फागुन मसान्तसम्मको ७ हजार, यसअघि ७५ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापनबाट बाँकी रहेको २५ प्रतिशत दरबन्दी र सुविधामात्रै रोजेका अस्थायी शिक्षकहरुको ५५ सय गरी गत जेठमा प्राथमिकतहका लागि ९ हजार ९ सय ९६, निम्नमाध्यमिक तहका लागि १ हजार ६ सय ३५ र माध्यमिक तहका लागि १ हजार १०८ दरबन्दी माग गरेको थियो । कुल १२ हजार ७ सय ३९ पदका लागि भएको विज्ञापनमा २ लाख ५० हजारबढीले आवेदन दिएको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको शिक्षक सेवा आयोगका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी दामोदर आचार्य बताउँछन् । यो संख्या अझ बढ्न सक्ने उनले बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा बढाएका छन्। वित्तीय संस्थाहरुको निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को तुलनामा २२ दशमलब ५ प्रतिशले बढेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १८ दशमलब २ प्रतिशतले बढेको थियो।निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह २२ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै, विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह २५ दशमलब ६ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह १६ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको छ। वित्तीय संस्थाहरुले सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह बढाएका छन्। कृषि क्षेत्रको कर्जा प्रवाह गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० दशमलब ८ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह सबैभन्दा थोरै १९ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेको छ।
मुम्बइमा १८ तल्ले भवन आगलागी, ४ जनाको मृत्यु
मुम्बइको परेलमा रहेको १८ तल्ले भवनको बाह्रौं तल्लामा आगलागी हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीका कारण उत्पन्न भएको धुँवाका कारण निस्सासिएर उनीहरुको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। मृत्यु हुनेहरुमा एक वृद्धा महिला र तीन जना पुरुष रहेको बताइएको छ। उक्त भवनमा फसेका ३५ जनालार्इ क्रेनको सहयोगमा उद्दार गरिएको थियो भने घाइते भएका २० जनालार्इ अस्पतालमा भर्ना गरिएको जनाइएका छ। उक्त भवनको बाह्रौं तल्लाको एक भागमा विद्युतको तारमा आगो लागे पछि धुँवा पुरै भवनमा फैलिएको भारतको फायर डिपार्टमेन्टका अधिकारीहरुले बताएका छन्। फायर डिपार्टमेन्टका अधिकारीहरुका अनुसार उक्त भवनमा आगलागी भएको खण्डमा आगो निभउने कुनै प्रबन्ध थिएन। त्यसैले उक्त भवनलार्इ असुरक्षित घोषणा गर्दै सोसाइटीविरुद्ध मुद्दा चलाइने भएको छ। हाललार्इ त्यहाँको विद्युत र पानीको आपूर्ति बन्द गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
तालिवानद्वारा निजी कम्पनीमा कार्यरत २९ कामदार मुक्त
अफगानिस्तानको एक निजी कम्पनीमा कार्यरत विभिन्न २९ जना कामदारलाई यहाँको सशस्त्र लडाकू समूह तालिबानले मुक्त गरिदिएको छ । अफगानिस्तानको दक्षिणी प्रान्त कान्दाहारको एक निजी कम्पनीमा कार्यरत ती कामदारलाई उनीहरुले मुस्लिम पर्व इद अल अधाको अवसर पारेर मुक्त गरिदिएका हुन् । कान्दाहारको एक कम्पनीमा कार्यरत उनीहरु तालिवानको अपहरण्मा परेका थिए । उनीहरुलाई तालिवानहरुले आफ्नो हिरासतमा राखेको जानकारी दिएका थिए । गएको जुन महिनाको मध्यतिर उनीरुलाई नियन्त्रणमा लिएर तालिवानका लडाकूहरुले हिरासतमा राखिएको जनाएका थिए । बुधबार उनीहरुलाई तालिवान समूहका नेताको आदेशमा रिहा गरिएको बताइएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पका दुई सहयोगी अदालतबाट दोषी ठहर
अमेरिकी अदालतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि सन् २०१६ को चुनावी अभियानमा वित्तीय नियमको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ भने उनका दुईजना नजिकका सहियोगीमाथि जेल सजाय तोकेको छ।राष्ट्रपति ट्रम्पकै आदेशमा चुनावी रकम गैरकानुनी भुक्तानी भएको उनका पूर्व सहयोगी माइकल कोहेनले अदालतसमक्ष बयान दिएका छन्। अमेरिकाकै दुई सहरमा सन् २०१६ को चुनावताका भएका रकम दुरुपयोगका विषयमा अदालतले सुनुवाई गरिरहेका छन्। ट्रम्पका लामो समयदेखिका कानुन व्यवसायी माइकल कोहेनले चुनावी प्रचारको रकमको दुरुपयोग भएको स्वीकारेका कारण न्यूयोर्कको अदालतले उनीमाथि आठवटा मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ।
एसियाड कबड्डीमा नेपालले मलेसियालाई हरायो
१८औं एसियाली खेलकुद (एसियाड)को कबड्डीतर्फ नेपालले मलेसियालाई हराएको छ ।
इन्डोनेसियामा जारी प्रतियोगिताअन्तर्गत् समूह ‘बी’को चौथो खेलमा नेपालले बुधबार मलेसियालाई १७–२९ ले हराएको हो ।कबड्डीको पुरुषतर्फमात्रै भाग लिएको नेपालले बुधबारको पहिलो खेलमा भने इरानसँग हार व्यहोरेको थियो ।नेपाललाई इरानले ७५–२१ को विशाल अन्तरले हराएको हो ।नेपालले यसअघि कबड्डीमा इन्डोनेसिया र जापानसँगको खेल हारिसकेको छ । समूहको अन्तिम खेलमा नेपालले बिहीबार पाकिस्तानसँग खेल्नेछ ।
एसियाली खेलकुद : ४ खेलमा नेपालको चुनौती समाप्त
इन्डोनेसियाको राजधानी जाकर्तामा भइरहेको १८औं एसियाली खेलकुदको पाँचौ दिन जारी रहदा नेपालको ४ खेलमा चुनौती समाप्त भएको छ। बिहीबार उसु र टेनिसमा नेपालको चुनौती समाप्त भएको हो। टेनिसको महिला डबल्समा बुधबार प्रतिस्पर्धा गरेका नेपालका मायांका राणा र महिका राणा क्वार्टरफाइनलमा पराजित भएका हुन्। अहिलेसम्म नेपालको कुस्ती, उसु, लनटेनिस र सुटिङमा चुनौती समाप्त भएको छ।
आज विहानको ताप्लेजुङको न्युनतम तापक्रम १९.३ डिग्री सेल्सियस रहेको थियो भने दिउसोको अधिकतम तापक्रम २६.६ डिग्री सेलसियस रहेको पुर्वि क्षेत्रिय हावापानी फिल्ड कार्यलय ताप्लेजुङले जनाएको छ । आज सुर्योदय विहान ५ बजेर २८ मिनेटमा भएको थियो सुर्यास्त अघि साँझ ६ बजेर २४ मिनेटमा भएको छ ।